जनयुद्धमा कार्यकर्तालाई जंगल पसाएर प्रचण्ड दिल्लीमा जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर बस्थे: प्रधानमन्त्री ओली « Bagmati Online
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जंगल नबसेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता जंगलमा राखे पनि प्रचण्ड दिल्ली बसेको बताएका हुन्। ‘उहाँ जंगल बसेको होइन। त्यसबेला दिल्ली हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कार्यकर्ता जंगल बसाउनुभयो। जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर उहाँ दिल्ली बस्नुहुन्थ्यो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई ०७४ सालको चुनावमा चितवनमा आफूहरूले जिताएको बताएका छन्।
‘०७४ मा चितवनमा उहाँलाई हामीले जिताएको हो। ठूला सभा गरेर। जनतालाई लौन भोट हालिदिनुस् भनेर आग्रह र अनुरोध गरेर जिताएको हो,’ ओलीले भने, ‘०७० सालमा त बत्ती निभाएर, बाकस साटेर। त्यसअघि कीर्तिपुर हारेको। रोल्पा, सिरहा, कीर्तिपुर हुँदै चितवन जानुभयो अब कता जाने हो? जंगल जाने होइन।’ उनले प्रचण्डले पार्टी छाडिसकेपछि सूर्य चिन्ह दाबी गरेको पनि बताएका छन्।
‘प्रचण्डले सूर्य चिन्हबाट एकपटक चुनाव लड्नु भयो? कहिलेबाट तपाईंको भो सूर्य चिन्ह?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह? दशा लागेपछि के लाग्छ।’ उनले केही सञ्चार माध्यमले सरकारका राम्रा काम नदेखेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरूद्ध मुद्दाहरू दर्ता भइरहेकोले कानुन पढेकाहरूले काम पाइरहेको बताए। विगतमा आफ्नो सरकार प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले ढालेको उनले बताएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल तीन महिनामा नागरिक समाज हुन्छन्: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई तीन महिनामा नागरिक समाजका अगुवा बनाउने बताएका छन्। प्रचण्ड र नेपालले पार्टी चलाउन नसक्ने उनको टिप्पणी छ। आज नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘एक जना साथी त अस्ति नागरिक अगुवा भएर जानुभएछ। यसो चित्र निहालेर हेरेँ अरू अझै गएका रहेनछन्। प्रचण्ड-नेपालहरूको पनि बाटो त्यही हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड-नेपाल तीन महिनामा नागरिक समाज हुने पनि ओलीको दाबी छ । ‘उनीहरू पनि त्यहीँ पुग्छन् । पार्टी सिध्यो। तीन महिना लाग्छ। तीन महिनामा यिनीहरू पनि नागरिक समाज हुन्छन्।’ प्रचण्ड-नेपाललाई नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ठिक गरेको पनि दाबी गरेका छन्।
उनले अस्थिरता रोकेको पनि बताए। अबको चुनावबाट देशभक्तिलाई जनताले जिताउने उनको दाबी थियो । चुनावमा जान प्रचण्ड-नेपाल डराएको र चुनावदेखि आत्तिएको ओलीको आरोप छ।